युवतीमाथि बलात्कार भएको भन्दै परिवार प्रहरीमा- वाग्मती - कान्तिपुर समाचार
युवतीमाथि बलात्कार भएको भन्दै परिवार प्रहरीमा
असार १, २०७७ कान्तिपुर संवाददता
मकवानपुर — हेटौंडामा सुस्त मनस्थितिकी युवती बलात्कृत भएको भन्दै परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । स्थानीय एक युवकले युवतीलाई जेठ २४ गते घरनजिकैको मकैबारीमा लगेर बलात्कार गरेको उनीहरूको आरोप छ ।
परिवारले पाँचौं दिन जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरमा जाहेरी दर्ता गराएपछि घटना बाहिरिएको हो । आरोपित युवक फरार रहेको प्रहरी नायब उपरीक्षक इन्द्रबहादुर रानाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अविवाहित युवतीलाई ती युवकले दिउँसो २ बजेको समयमा पैसाको प्रलोभन देखाएर बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ । ‘पीडित पक्षले किटानी जाहेरी दिएको छ । सोही आधारमा फरार रहेका आरोपीलाई खोजिरहेका छौं,’ उनले भने । रानाले घटनाबारे प्रहरीलाई ढिला खबर गरिँदा आरोपी भाग्न भ्याएको बताए ।
प्रकाशित : असार १, २०७७ ०८:२८
महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा
जेष्ठ २२, २०७७ कान्तिपुर संवाददता
काठमाडौँ — कोरोनाको उपचार सामग्री खरिदमा विवादमा पर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले लकडाउनकै क्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठसहित ६ उच्च अधिकारीको सरुवा गरेको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदकाबीच स्वास्थ्य सचिव यादव कोइराला सरुवा भएको एक सातामै विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठसहित ६ जनासमेत हेरफेरमा परेका हुन् । श्रेष्ठसमेत महानिर्देशक भएको तीन महिनामै सरुवामा परेका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको निर्णयबाट विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा काजमा पठाइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका डा. दीपेन्द्ररमण सिंहलाई विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ । विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेललाई मन्त्रालयमा तानिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद विवादमा परेका कारण विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ र आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डोटेललाई एकैचोटि सरुवा गरिएको दाबी मन्त्रालय स्रोतको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका प्रमुख डा. रमेश खरेललाई विभागको आपूर्ति व्यावस्थापन महाशाखाको निर्देशकमा सरुवा गरेको छ ।
मन्त्रालयले परोपकार प्रसूति गृह थापाथलीका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमलाई समेत मन्त्रालयमा तानेको छ । प्रसूति गृहको निर्देशकको जिम्मेवारी डा. संगीता कौशललाई दिइएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ २२, २०७७ १६:०२